अमर संवाद - | Kavyalaya - काव्यालय
by yubaraj भदौ २१, २०७६
धेरै समय भइसकेको थियो अमर दाई सँग कुरा नभएको । गुलाबी उमेरको बजारमा उत्तिकै चर्चा चुलिदै थियो । यसै बखत कुराकानीमा राखेका केहि प्रश्नहरुका उत्तर सहित।
१.आफुलाइ मन परेको आफ्नो पुस्तक ?
⇒ एउटै किताबको नाम लिनु पर्दा – पासेकगु । छोटकरीमा लेखेको हुँ; बुझिहाल्नुभयो होला । 😁
२. तिन वटा कृति प्रकाशित र अर्को प्रकाशन को क्रम मा छ, सेतो धर्ती ले त २०६८ साल को मदन पुरस्कार समेत पाइसकेको छ। यश अर्थमा, कस्तो कृतिले पाउने रहेछन त मदन पुरस्कार ?
⇒ ओजिला पुरस्कारले ओजिला किताबलाई नै पुरस्कृत गर्छन् । बाँकी त म पनि तपाईं जस्तै हुँ, पुरस्कृत किताबहरु सबै सार्वजनिक छँदै छन् । पढ्नेहरु जोसुकैले भन्न सक्छौं, कस्ता किताबले पुरस्कार पाउँछन् । तर सीमा जहाँ पनि हुन्छ ।
३. सिनेमाहरु कत्तिको र कस्ता हेर्नुहुन्छ ?
⇒ फुर्सद मिलेसम्म हेर्छु । साहित्य मिसिएको फिल्म हेर्न रुचाउँछु । सिनेमा कि जीवन जस्तो लागोस् कि प्रतीकात्मक होस् ।
४. नेपालमा पुस्तक माथि सिनेमा एकदमै कम बनेका छन्। तर बाहिर तिर यसको राम्रै प्रचलन देखिन्छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ?
⇒ चाहे किताबको होस् या सिनेमाको, हाम्रो बजार सानो छ । पुस्तकमाथि बनेका केही सिनेमा पनि त्यति असल बन्न सकेका छैनन् । अलिअलि मसला मिसाएर बनाउन खोज्दा सिनेमाले न पुस्तकलाई न्याय गर्छ न कमर्सिएल सिनेमालाई । फर्मुलामा सिनेमा बन्ने चलनबाट हाम्रो सिनेमा उद्योग बिस्तारै माथि उठ्दै छ । नयाँ सोचका साथ नयाँ पुस्ता पनि आएको छ । त्यसैले भविष्यमा पुस्तकमाथि पनि गजब सिनेमा बन्लान् ।
५. कृतिका लागि पात्रहरु कसरी भेटिन्छन्/भेटिएकाछन्? केही अनुभव सुनाउनुस् न।
⇒ कहिले खोजेको बेलामा पनि भेटिँदैनन्; कहिले नखोजेको बेलामा पनि भेटिन्छन् । यस्ता अनुभवहरु त किताबै पुग्नेगरी छन् । त्यसैले अहिलेलाई यत्ति भन्छु, शहरमा मान्छे धेरै भेटिन्छन् पात्र कम; गाउँमा मान्छे थोरै भेटिन्छन् पात्र धेरै । भन्नुको अर्थ, गाउँसँग शहरसँग जस्तो आवरण हुँदैन । गाउँ निश्चल र हार्दिक हुन्छ । गाउँमा आउने जोसुकैलाई पनि बिना पैसा गाउँले हार्दिक स्वागत गर्छ । खुलेर बोल्छ र आफ्नो कथा सुनाउँछ । त्यसैले मेरा पात्रहरु प्रायः गाउँका हुन्छन् । केही शहरका जस्ता लागे पनि गाउँबाट नै आएका हुन्छन् । पानीको घाम नेपालगन्ज शहरमा बसेर लेखें, तर ती पात्र सबै गाउँका हुन् ।
गुलाबी उमेर by Amar Neupane
अमर न्यौपानेको आज बिमोचन हुँदै गरेको उपन्यास “गुलाबी उमेर“।